Wasiirka Isdhexgalka oo xafiiskiisa u soo raray xaafada Soomaalida Rinkeby | Somaliska
Wasiirka isdhexgalka Sweden Erik Ullenhag ayaa maanta xafiiskiisa u soo raraya xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Rinkeby isagoo halkaas ka shaqeyn doona mudo 1 isbuuc ah.
Wasiirka ayaa sheegay in siyaasiyiinta Sweden ay iska ilaaween goobaha ay ajaanibta ku badanyihiin sida Rinkeby, isaguna uu doonaya in uu toosh ku daaro goobahaas oo wadda hadal la yeesho dadka ku nool xaafadahaas. iyo in uu helo fikrado ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka jira xaafada Rinkeby.
Wasiirka ayaa soo kaxaystay dhamaan shaqaalihiisa oo iyaguna ka shaqeyn doona Rinkeby. Xafiiska cusub ee wasiirka ayaa noqon doona guriga ummada (Folketshus) halkaasoo uu ku qaabili doono shacabka. Xitaa qadada ayuu ka cuni doonaa Rinkeby iyo Kista.
Wasiirka ayaa sheegay in uu eegi doono ganacsiga ka socda goobta, isagoo intaasi ku daray in dowladu ay ku fikireyso in ay canshuurta ka dhimaan shirkadaha ka dhisan xaafadaha soo galootigu ku badanyihiin.
Mar la waydiiyay sababta uu ku doortay xaafada Rinkeby ayuu ka dhawaajiyay isbedalka ka dhacay xaafadaas iyo kuwa la midka ah ee ay ku badanyihiin soo galootiga. Waxaa kale oo uu muujiyay in aysan booqashadiisu xal degdeg ah u keeneyn xaafada balse uu doonayo in uu xasuusiyo siyaasiyiinta in aysan iloobin goobahaan.
anigu mu umalaynayo inu wasirku isbedal kamujindono xafadahas asc
Walal jimcale waxan kuway dinaya aniga webka hadan kusobiray marka isticmalka mafahansani ok miya qoralkeyga masobaxaya mahadsanid
Walal jimcale wan idin salamay dhaman bahda somaliska tan kale wad ku mahadsan tahay dadalka ad ugashay sidi aad akhbarta nogu so gudbisid manta aya igu horaysa fikradaha laga qayb qadanayo
saredo hadad hada webka kusoobiirtay durba negativ ayaadba kusoo kordhisay ee marka hore postive ka badi qoraalkaaga wuu soobaxay anigana waxaan aaminsanahay isbedel ayaa kusoo kordhaya tusalo inadha madaxda ayaa xafada kusoo kordhaysaa
Kkkkk warunta hasan wakumadsantay jawabta
asc halkan waxa aan ka salaamayaa dhamaan somalida meel kasta oo ay joogaan ,,,,, gaar tahaan jimcaale walal waxa aan ku weydiinayaa somalida joogta sweden ee shariciga loo diidey maxaa loo qorsheeyey ? walal adiga mahadsan iiga soo jawaab wsc ????????
March 12, 2012 at 16:00
Yaa yab jimcale wax kasta isagu ma ogyahay?
Walal jimcale wan ku salamay 114 salan ka dib dadka aan wax isku dhalin wali waxa la dhahay waxa laga raba aqonsi surtagal ma tahay warqdaha mandhaytka la dhoho oo ay bixiso unhcr ma noqon karan aqonsi walalayal qofki igu cawin kara akhbar wan ka codsanaya
WAsiirku waxoow Rabaa in oow dad-ka soomaaliyeed Dhaqan Rogo sow maahan!? hadaba ka yeeli meeynu oo inagu waxa ku taagan nahay Xaqqa, isagaba daali doona, markii kobaha looga siibto meesha.
Hal todobaad oo shaqo ah waa is tustus iyo in saxaafadda ay wax ka sheegto ra,yiga Soomaalidana in uu ogaaaduu rabaa.
kkkkkkkkkkkkkkkk wax dhiba malaha wasiirku shaqo is dhaxgala ayuu wadaa bas sas cml waaye